Iibhotile zeglasi zeglasi zobuqu
Iibhotile zeglasi zevumba lobuqu zobuqu zeCOM AROMA. Singabavelisi beebhotile zeglasi ezilungiselela ivumba kunye nemveliso yezithambiso. Iibhotile zethu ezisemgangathweni zibekwe ngokufanelekileyo ukunceda uphawu lwakho. Unenketho yokuba nebhotile yakho yesiko eyile ...
Ngaba ukupakisha okuphezulu kungagcina izithambiso ixesha elide?
Uyilo lwempompo lwepompo lweemveliso zokhathalelo lolusu lusebenzisa amandla okurhoxisa entwasahlobo ukuthintela umoya ukuba ungangeni kwibhotile, okukhokelela kwisimo sokungasebenzi, ngaloo ndlela kufezekiswa iziphumo zokusebenzisa "kuphela ngaphandle kodwa hayi". Qho xa ucinezela intloko yempompo, ipiston encinci emazantsi e ...
Kutheni le nto intsingiselo ifuna ibhotile yeglasi emnyama / yeAmber?
Indima yeglasi emnyama: Kukuthintela imitha ye-ultraviolet elangeni kunye nokuthintela ezinye izithako ezisebenza ngokufotwa ukuba zingabinayo ioksijini kunye nokubola. Ngokubanzi, iibhotile zeglasi ezimnyama zisetyenziselwa ukhathalelo oluphezulu lweemveliso ezinjenge-antioxidant, anti-ukuguga kunye nokwenza mhlophe. Uviwo ...
Umsebenzi wokupakisha wezinto ezahlukeneyo (Iglasi, iPlastiki)?
Iibhotile zeplastiki VS Iibhotile zeglasi, yeyiphi engcono? Zintathu izinto eziphambili zezixhobo zokhathalelo lolusu: iplastiki, iglasi kunye nesinyithi. Phakathi kwazo, eyona akhawunti isetyenzisiweyo yeplastikhi ukuya kuthi ga kwi-80%, ilandelwe yiglasi, ngelixa i-akhawunti yesinyithi i-8% kuphela. Nangona ukusetyenziswa kweplastiki kukucofa ...
Indlela yokwenza nokupakishwa shockproof?
Ukupakisha okungothuswanga, ukunciphisa isiphumo kunye nokushukuma kwemixholo, thatha amanyathelo okukhusela ukukhusela ukupakishwa kwayo. Izinto zokupakisha ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zibandakanya: iplastiki enegwebu, ikhadibhodi yobusi, ukubumba kwempuphu, ikhadibhodi enamazinki, iphepha, umqamelo womoya kunye ...
Iinkcukacha zeMveliso kunye neNdleko-ICOMI AROMA
Iibhotile zeglasi zezithambiso zahlulwe ikakhulu: kwimveliso yolusu (cream, lotion), isiqholo, ioyile efunekayo, ipolishi yesikhonkwane iindidi ezininzi zomthamo zincinci, ngaphezulu kwama-200 ml amandla kunqabile ukuba asetyenziswe kwizithambiso. Ukuthengisa iimpahla ezishushu ezinesitokhwe esikhulu, ezinje ngebhotile yeoyile ebalulekileyo ...
Ibhotile yokuPakisha yeGlasi yeGlobal yeGlobal
ngomphathi ku 20-11-14
Uphando kunye neeMarike zikhuphe ingxelo malunga nembonakalo yentengiso yeglasi yeglasi yehlabathi (2019-2027). Ngokwengxelo, intengiso yeglasi yebhotile yokupakisha iglasi ye-US $ 63.77 yezigidigidi ngo-2019 kwaye kulindeleke ukuba ifike kwi-US $ 105.44 yezigidigidi ngo-2027. Ngexesha lesibikezelo, ikhomishini ...
Iingxaki eziqhelekileyo ekuPrinteni ukuHanjiswa kwaManzi kunye neeMilinganiselo ezihambelanayo
Unobangela wohlalutyo lweengxaki eziqhelekileyo kushicilelo lokudluliselwa kwamanzi kunye nemilinganiselo engqinelanayo 1. Imveliso ineeping, iincinana, amaqamza amancinci kunye nokubonakala okurhabaxa emva kokudluliselwa kwamanzi. Uhlalutyo lwesizathu: • Indawo yokusebenzela engalunganga, uthuli oludadayo, uthuli kumphezulu womsebenzi okanye uthuli ...
Imakethi yokuPakisha iglasi-ukukhula, iintsingiselo, kunye noqikelelo (2020 - 2025)
Imakethi yokupakisha iglasi yehlabathi yaqikelelwa kwi-USD 56.64 yezigidigidi ngo-2019, kwaye kulindeleke ukuba ibhalise i-CAGR ye-4.39%, ukufikelela kwi-USD 73.29 yezigidigidi ngo-2025. Ukupakishwa kweglasi kuyaziwa njengeyona ndlela ithembekileyo yokupakisha kwezempilo, incasa kunye nemeko yokhuseleko. Ngaphandle kokujongana nobunzima ...
Izithambiso kunye nePerfumery Glass Bottle Market - ukukhula, iintsingiselo, kunye noqikelelo (2020 - 2025)
I-COMI AROMA Yiza neebhotile ze-Beautuful kwihlabathi. Amagqabantshintshi eMarike Izimonyo zehlabathi kunye neebhotile zeebhotile zeglasi zithengiswe ngexabiso le-USD 1809.28 yezigidi kwi-2019 kwaye kuqikelelwa ukuba kungqina i-CAGR ye-3.63% kwixesha eliqikelelweyo (2020-2025). Ukuhlala ezidolophini, ukukhula kwenkulungwane yeminyaka, a ...
Kutheni ukhetha iGlasi?
ICOMI AROMA Ukubonelela ngeNdalo, iipesenti eziyi-100 ezinokuphinda zisebenze, zisetyenziswe kwakhona, iibhotile zezeMpilo zokuPakisha iZithambiso, ukuPakisha kweDiffuser. www.comiaroma.com Izibonelelo zokupakishwa kweglasi zicacile: zizinzile, zigcwele, Ziyi-100% kwaye zinokuphinda zisebenze kwakhona, zinokuphinda zisebenze kwaye ziyagcwaliseka; kukhuselekile ukuyigcina ...
Abenzi bePerfume abangenako ukujoja into.
Iinkampani ziya zijikela kubuchwephesha ukuze zenze ezona zixhobo zithengisa kakhulu, ezizodwa ezinokuveliswa ngemizuzu nje. Kunyaka ophelileyo, umvelisi waseSwitzerland waseGivaudan Fragrances waseSwitzerland wasungula iCarto, isixhobo esenziwe ngobukrelekrele bokunceda iziqholo. Sebenzisa isichukumisi sokuchukumisa ...
Isikhongozelo seglasi luhlobo lweglasi ekuveliseni izitya zeglasi, ezinje ngeebhotile, iingqayi, iziselo, kunye nezitya. Isikhongozelo seglasi sime ngokuchaseneyo neglasi ethe tyaba (esetyenziselwa iifestile, iingcango zeglasi, iindonga ezibonakalayo, iifestile) kunye neglasi yefayibha (esetyenziselwa ukufakwa kwe-thermal, kwi-fiberglass com ...
Inkqubo yokuThengisa iBhotile yeglasi
Inkqubo yokuThengisa iBhotile yeglasi Inkqubo yokuvelisa ibhotile yeglasi yenzeka kumzi-mveliso wesikhongozeli seglasi ngamanyathelo amaninzi. Iinkqubo zokugqibela ezitshisayo Inqanaba lokuqala lenkqubo yokuvelisa ibhotile yeglasi iqala ngeenkqubo ezishushu zokuphela, ezihlala ziqesha ubushushu obuphezulu ukuvelisa ...
Soda Lime Glass-Yintoni iglasi yekalika yeSoda?
Yintoni i-Soda Lime Glass? Iglasi yekalika yesoda lolona hlobo luqheleke kakhulu lweglasi, lokwenza iipesenti ezingama-90 zazo zonke iiglasi ezenziwe. Emva kokuba yenziwe ngamakhulu eminyaka, ludibaniso olusisiseko lwe-silica, isoda, kunye nelikalika eneempawu ezahlukeneyo eziluncedo kwizicelo ezahlukeneyo ...
Sonke siyayazi into eyenziwa sisitshizi senkungu, ukuhambisa isitshizi senkungu ukuhambisa imveliso, kodwa ukhe wazibuza ukuba isebenza njani? Okokuqala, ufuna kangakanani inkungu yakho? Kuxhomekeka kwimveliso yakho, unokukhetha uhlobo lwe-misting esebenza ngcono kuwe. Isitshizi esihle senkunkuma sihambisa okufutshane, okugudileyo ...
Ukufumana iphakheji yemveliso yakho kuphela kwenxalenye yokuqala yomsebenzi, ngoku kuya kufuneka uqiniseke ukuba imveliso yakho iya kudlula itywina kunye nokwehla kobunzima kunye nokuba ubuninzi buzokuhanjiswa njani. Kulapho ukhetha kakhulu ukuvalwa kwakho. Nazi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha ukuvalwa kwephakeji yakho. Cl ...
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekufezekiseni ngempumelelo inkangeleko yakho oyifunayo yindlela iphakheji yakho ehonjiswe ngayo. Kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo xa kusiziwa ekuhombiseni nasekugqibeni, kodwa nazi ezinye zezona zixhaphakileyo: Umbala ongaphakathi komngundo kumbala ongumbumbulu yindlela elula ...
Ukupakisha iiprojekthi kubalulekile
Ukutsha kumzi mveliso wokupakisha kuhamba ngokukhawuleza kwaye akupheli. Ukuziqhelanisa nokutshintsha komhlaba okupakisha ngokukhawuleza kufuna indlela yokucinga eya phambili ekufumaneni izixazululo zokupakisha ezikumgangatho ophezulu, ezizodwa, kunye neendlela ezintsha eziza kunceda iimfuno zabathengi bakho. Nazi ezine ke ...
Eyona milinganiselo ibalulekileyo yesikhongozeli kukugcwala komthamo (OFC) kunye nomthamo wokugcwalisa umnatha (NFC). Ukuqonda umahluko phakathi kwezi zimbini kunokunceda ekukhetheni iphakheji efanelekileyo yesicelo sakho kunye nokunciphisa inani lokugcwalisa kunye neelebheli zeempazamo zebango. Amandla okuGqithisela (OFC) T ...
Ibhotile yeglasi yokurisayikilisha
Iziqulatho zeglasi zibonelela ngesisombululo esomeleleyo kwiimfuno zakho zokupakisha. Iglasi iyi-100% iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe ngokufanelekileyo ayinakuze ilahlekelwe bubunyulu bayo okanye umgangatho wayo nokuba iphinda isetyenziswe kangaphi. Iglasi yokurisayikilisha kwakhona yinkqubo efanelekileyo nesebenzayo enokujika iglasi endala bo ...